‘क्वारेन्टाइनमा बसेका नेपालीमा कोरोना नदेखिएपछि खुसी हुँदै घर फर्किए’ « Postpati – News For All
‘क्वारेन्टाइनमा बसेका नेपालीमा कोरोना नदेखिएपछि खुसी हुँदै घर फर्किए’
फागुन २०, भक्तपुर  । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को प्रकोप रहेको चीनबाट उद्धार गरी ल्याइएका नेपालीलाई कोरोना भाइरस नभएपछि सोमबारबाट क्वारेन्टाइनमुक्त भएका छन् ।
यही फागुन ४ गतेदेखि भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको क्वारेन्टाइनमा बसेका नेपाली सोमबारबाट घर फर्किएका हुन् । चीनबाट ल्याइएका १७५ जनालाई कोरोना भाइरस नेगेटिभ रिपोर्ट आएको थियो । दोस्रो चरणमा पनि कोरोना भाइरस नेगेटिभ आएपछि सोमबार एक समारोहबीच उनीहरूलाई बिदाइ गरियो । यो खबर गोरखापत्रमा सरोज ढुङ्गेलले लेखेका छन् ।
१६ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बिताएका नेपाली बिदाइ हुने क्रममा नेपाल सरकार जिन्दावाद, नेपाली सेना जिन्दावाद, नेपाली मिडिया जिन्दावाद, नेपाल प्रहरी जिन्दावादजस्ता नारा लगाउँदै चीनबाट उद्धार भएकोमा खुसी देखिन्थे । धेरैबेरसम्म नेपाल सरकार, मिडिया र नेपाली सेनाको जयजयकार गर्नुभएका उहाँहरूले जीवनमा सबैभन्दा खुसीको क्षण भएको बताउनुभयो ।
यदि सरकारले चीनबाट उद्धार गरेर नल्याएको भए आफूहरूलाई कोरोना सङ्क्रमण हुनसक्ने, चीनमा खान, बस्नको असुविधा हुनेजस्ता समस्याबाट आफूहरू मुक्त भएको उहाँहरूले बताउनुभयो । चीनबाट उद्धार गरेर क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएका डा. गौरव पोखरेलले आफूहरूलाई सरकारले ठूलो गुण लगाएको बताउनुभयो । यतिको व्यवस्थापन होला भनेर पत्याउन नसकेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले हाम्रा लागि धेरै ठूलो काम गरेको छ । सायद यतिखेरसम्म चीनमा भएको भए हामीमध्ये कतिपयलाई कोरोना भाइरस लागिसकेको हुन्थ्यो ।” विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार क्वारेन्टाइन अवधिभर दुईपटक थ्रोट स्वाबको परीक्षण गर्नुपर्छ । दुवै पटकको परीक्षणमा उहाँहरूमा कुनै पनि समस्या वा भाइरस पोजेटिभ नदेखिएपछि सोमबार बिदाइ गरिएको हो ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) अति प्रभावित चीनको वुहानबाट विमान चार्टरमार्फत फागुन ४ गते आइतबार नेपाल ल्याइएको थियो । महामारी नियन्त्रणमा पहिलोपटक विदेशबाट उद्धार गरी ल्याइएको यो नेपालको इतिहासमा पहिलो हो । नेपालीलाई बिदाइ गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री नवराज रावत क्वारेन्टाइन पुग्नुभएको थियो ।
त्यस क्रममा उहाँले कोरोना भाइरस नदेखिएकोमा सबैलाई बधाई दिनुभयो । नेपालमा कोरोना भित्रिन नदिन सरकारले उच्च सतर्कता अपनाएको जानकारी दिनुहुँदै उहाँले क्वारेन्टाइनको अनुभवलाई जीवनमा लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले तीन दिनअघि मात्र सरकारले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएअनुसार तीन दिनमै उद्धार गरी ल्याइएका नेपाली बस्ने ठाउँ तयार पारेको बताउनुभयो । उहाँले एक जनालाई पनि कोरोना नदेखिएकोमा उद्धार भएका व्यक्ति मात्र होइन, अहिले सबै नेपाली खुसी भएको बताउनुभयो ।
नेपाली सेनाका चिकित्सक नवीन न्यौपानेले १६ दिनसम्म व्यवस्थापनमा खटिएर नयाँ अनुभव हासिल गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले उद्धार गरिएका नेपालीले क्वारेन्टाइनमा रहँदा धेरै सहयोग गरेको बताउनुभयो ।
क्वारेन्टाइनका विद्यार्थी डा. सविर श्रेष्ठले चीनमा रहेका नेपाली बसेको ठाउँमा सुरक्षा निकायले ताला लगाइदिएको बताउनुभयो । हामी पनि अहिलेसम्म त्यहीँ बसेको भए त्यही हालतमा हुन्थ्यौँ होला, उहाँले भन्नुभयो, “हामी भाग्यमानी रहेछाँै, नेपाल सरकारले चाँडै उद्धार गरेर नेपाल ल्याइदियो ।” चीनमा २१ दिन रहँदा खान, बस्न असुविधा भइसकेको जानकारी दिँदै उहाँले नेपाल ल्याइसकेपछि सरकारले गरेको व्यवस्थापन एकदम राम्रो रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोसन पोखरेल, चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोम मिश्र पनि क्वारेन्टाइनस्थल पुग्नुभएको थियो ।
२०७६ फाल्गुन २०,मंगलवार को दिन प्रकाशित
#घर फर्किए नेपाली